mpamatsy set ho an'ny manicure - Mpanamboatra set manicure China
1. Ny lamaody Nail Clippers napetraka tamin'ny fomba kanto, manohana mpivarotra ambongadiny marobe. Ao amin'ny Stock / Fast Dispatch
2. Professional Nail Clippers Set, tsy tsara tarehy ihany, fa azo ampiharina ihany koa. Vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta ， Fitaovana mahaliana amin'ny hoditra, mety ho an'ny rehetra. Mety amin'ny mpiasa manicure pedicure matihanina.
3. Ny fantsom-bozaka vita amin'ny fantsika vita amin'ny akora avo lenta, ny fitaovana Nail dia tsara tarehy, mateza ary ahazoana aina raha mikasika azy.
4. Ity Nail Clippers Kit ao anatin'izay rehetra ilainao ampiasaina amin'ny manicure sy pedicure isan'andro.Fitaovana feno, mora ampiasaina.
5. Mety amin'ny fampiasana matihanina na fampiasana an-trano, Salon fanatsarana tarehy, fivarotana manicure, fivarotana pedikika sns sns ho an'ny olona ao anatin'izany ny novice, Ekeo ny fanaingoana.
6.Exterior izay vita amin'ny mainty hoditra PU hoditra dia toa manokana sy feno mistery.
7.Vita amin'ny vy tsara kalitao, avelao ho azo antoka ny fanaingoana, misoroka ny fahalotoana ary mampihena ny risika amin'ny aretina.
8.MUTIL-FUNGCTIONAL: Manicuring, Pedicuring, Anti-Acne, Exfoliating, Volomaso amin'ny volomaso.
9. Mora entina amin'ny dia an-trano.
15 pcs Professional Manicure Set Pedicure fantsika Kit Stainless Steel Feet Care Tool Set
* Fitaovana avo lenta: Ny rakitra fantsika dia vita amin'ny fitaovana nohavaozina tamin'ny emery, izay sariaka amin'ny tontolo iainana,
manome anao traikefa tsara amin'ny fanaovana hoho.
* Volavola manify manify: Ireo rakitra fantsika maivana ireo dia mora sy mora ampiasaina. Apetaho fotsiny ny tsindry jiro dia afaka mahita valiny eo noho eo ianao, fa tsy hihozongozona!
* Birao Emery misy lafiny roa: ireo buffer fantsika ireo dia mety amin'ny hoho, rantsan-tongotra, fantsika voajanahary, fantsika akrilika, diso
fantsika ary toy izany hatrany amin'ireo zana-kazo emeraola misy lafiny roa.
* Mety tsara ho an'ny Salons And Home: Ireo rakitra fantsika fanao matihanina dia manome anao vahaolana tsara hitazomana ny hoho akrilika, voajanahary ary sandoka tsara tarehy. Azonao atao amin'ny salon sy matihanina amin'ny fantsika DIY ao an-trano.
IZLA 7 in 1 Stainless Steel Portable Manicure Set Manicure & Pedicure Kit Professional Nail Clippers Kit Pedicure Care Tools for Travel na Home
FAMPANDROSOANA LEHIBE 7 AMIN'NY KIT GROOMING 1: Ny fonosana manicure dia miorina amin'ny fantsom-boho,, ny fitaovana tsirairay dia namboarina tsara ary afaka mahafeno ny karazan-java-drehetra ilaina amin'ny fiainana isan'andro, napetraka eo am-pelatanana, miaina milamina.
100% Stainless Steel Fitaovana avo lenta: fitaovana manicure sy pedicure vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ity sety ity dia matanjaka ary natsangana mba haharitra, izay mamela ny fanamorana vidy, manakana ny fahasimbana ary mampihena ny risika amin'ny aretina.
Trangam-pandehanana amin'ny fitetezana portable: Te hanana hodi-kazo manicure izay tsy hipetraka amin'ny habakabaka ve ianao rehefa mandeha na any an-trano? IZLA pedikyorika napetraka miaraka amina habe azo ampiakarina, azonao atao ny mametraka azy na aiza na aiza tianao, toy ny kitapo, fiara, valizy, birao sns, mety amin'ny dia na an-trano.
Fanomezana tsara indrindra: Manicure Tools dia miaraka amina endrika famonosana kanto. Ny tranga dia vita amin'ny lamba avo lenta sy hoditra PU, izay tsara sy kanto ary manome fanomezana lehibe.
Fisorohana ny fatiantoka: Ny valizy vita amin'ny hoditra PU dia azo entina ary azo sokafana mora foana amin'ny tsindry bokotra iray, izay tena afaka miaro, mitahiry ny fitaovanao ary misoroka azy ireo tsy ho very.